जताततै करको आतंक,के केमा लाग्छ कर ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ३१ श्रावण २०७५, बिहीबार ०३:०४ |
काठमाडौं । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले हाटबजारमा मकै पोलेर बेच्नेसँग दिनको ४५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको छ ।
यसैगरी, हाँस, कुखुरा र परेवामा प्रतिगोटा १६ रुपैयाँसम्म कर तोकेको छ । खुद्रा तरकारी व्यापारीलाई वार्षिक १२ सय र ठेलामा फलफूल बिक्री गर्नेलाई १५ सय कर तोकेको छ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका किसानले भैँसी बेच्दा एक हजार कर तिर्नुपर्ने भएको छ । खसी बेच्नेले डेढ सय कर बुझाउनुपर्छ । नगरपालिकाले पशु करलगायत विभिन्न शीर्षकमा ४५ प्रकारका कर लगाएको छ ।
Previousडाेजरले गर्‍यो एम्बुलेन्सकाे काम
Nextवृद्ध भत्ताबाट पनि कर असुली !
छोराछोरीको कमाइ बाबुआमाका लागि छुट्टयाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने
१५ आश्विन २०७५, सोमबार ०२:४४